PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-11-04 - IJAJI LIHAMBISE UBUNTU PHAMBILI NGESINQUMO KOLUKA-HHP
IJAJI LIHAMBISE UBUNTU PHAMBILI NGESINQUMO KOLUKA-HHP
LINXUSE ukuba kusebenze ubuntu ngaphezu komthetho ijaji uratha Mokgathleng ngomdonsiswano obuphakathi kukankosikazi kajabulani “HHP” Tsambo, ulerato Sengadi noyise kamufi urobert Tsambo.
Udaba ngalo mdonsiswano belufakwe enkantolo enkulu egoli ngulerato, emisa izinhlelo zokuba lesi sihlabani sifihlwe kwelakubo emahikeng, enorth West, izolo ngoba efuna sifihlwe egoli.
Umndeni obuholwa nguyise kajabba, ubushaya phansi ngonyawo uthi kwakuba ngumfazi lokhu akugqamisayo, yinto engekho, ubeyintombi.
Lolu daba ludonse cishe usuku lonke ngolwesihlanu abameli bedonsisana. Okunye okuvelile enkantolo wukuthi kuningi okushintshile ngomthetho waphambilini mayelana nezinto zesintu emuva kokuphasiswa komthethosisekelo wezwe ngo-1996.
Umthethosisekelo yiwona ongaphezu kwakho konke okunye okuyimigomo nezinqubo zesintu ngokwehlukana kwamasiko.
Enkantolo kuvele okuningi okwenzeka kukhokhwa amalobolo nalapho ijaji belibuye licacisele abameli obekungabamhlophe, ukuthi kuyaye kwenziwe kanjani ngokwesintu nobekuphambene kokwejwayelekile. “Ngokosiko labo abasuke beganana kababi khona ngesikhathi kuxoxwa ngamalobolo, kodwa kuyacaca la ukuthi ujabba wayekhona ngokunjalo nommangali kubo, edube esoweto.
"Kuyavela ukuthi kunencwadi eyathunyelwa kubo kwammngali eyisicelo sokuzoxoxa ngobuhlobo, kuhlanganiswa indodana nendodakazi. Kuphinde kuvele ukuthi ngesikhathi kuxoxwa, kwavunyelwana ngelobolo lika-r45 000, kwafakwa u-r30 000 kwi-akhawunti kwase kuvunyelwana ukuthi esele izokhokhwa izikhawu ezimbili uma sekuhlanganwa futhi okunguR10 000 nor5000.
"Umthethosisekelo-ke kawuyichazi indaba yomshado wesintu, ichazwa wumthetho irecognition Act. Lo mthetho uthi kunezinto ezibhekwayo, okuyiminyaka engaphezu kwe-18 kwabashadayo, yilobolo nomgubho womshado.
Ngenxa yokuthi kunamalungiselelo umndeni obusuwenzile nezinhlaka ezithile zikahulumeni, kuzomele kubhekelelwe ukuthi yiziphi izinto ezizophazamiseka ngesifiso sikammangali. Umufi ubengumuntu wabantu futhi ngiyafisa nommangali awuhambele umngcwabo ngaphandle kokupha-zanyiswa,” kusho ijaji lichitha isicelo sikalerato.
Amaphepha athulwe enkantolo abeveza ukuthi laba bashada ngokwesintu mhlaka-28 kunhlolanja (February) 2016 nakuba kungabanga namgubho obekhona. Babecelane umshado beseholidini eholland, ujabba wathi bazokwenza izinto ngokwesintu kuqala. Izazi zesintu ezike zaphawula zithe uma kungazange kube nenyongo yesilwane esibulewe usuke uyinto engekho lowo mshado.
ISITHOMBE: SA BREAKINGNEWS
KUNGEZIKHATHI kusekuhle phakathi kukajabba nolerato Sengadi.